I-infographic: Umlando Omfushane Wokukhangisa Ngemidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
Ngenkathi imithombo yezokuxhumana eminingi ihlanza amandla nokufinyelela kwezinto eziphilayo marketing media social, kuseseyinethiwekhi okunzima ukuyithola ngaphandle kokunyuswa. Ukukhangiswa kwemithombo yezokuxhumana ngumakethe obungekho eminyakeni eyishumi eyedlule kepha okhiqize u- $ 11 billion ngemali engenayo ngo-2017. Lokhu bekusuka ku- $ 6.1 billion nje ngo-2013.
Izikhangiso zomphakathi zinikeza ithuba lokwakha ukuqwashisa, okubhekiswe kakhulu kudatha yezwe, inani labantu kanye nokuziphatha. Futhi, eziningi zezikhangiso zingabekwa ngokwesimo eduze kwezihloko ezifanele. Amapulatifomu amaningi anikezela ngamathuba wokumaketha kabusha kubavakashi abashiye isayithi lakho noma inqola yokuthenga babuyela emphakathini.
Angizange ngibe njalo umlandeli wokukhangisa ezinkundleni zokuxhumana, noma kunjalo. Ukungabaza kwami ​​ukukhangisa ezinkundleni zokuxhumana kuyinjongo yalowo osebenzisa imithombo yezokuxhumana. Uma bekumaqembu omphakathi aqondisiwe lapho intshisekelo ifana nesikhangiso, ingaveza imiphumela emihle. Kodwa-ke, uma inhloso yomsebenzisi ukuyovakashela umndeni wabo nabangane futhi ugcina udlala izikhangiso ezingabalulekile phakathi… ungahle ungatholi imiphumela oyidingayo ukuxhasa umkhankaso oqhubekayo.
Enye into esemqoka yokukhangisa ngemidiya yezenhlalo ukuqinisekisa ukuthi izixhumanisi zakho zimakwe kahle ngemininingwane yomkhankaso. Njengoba iningi labasebenzisi bemithombo yezokuxhumana lisebenzisa izinhlelo zokusebenza, eziningi zalezo zivakashi zingabonakala njengokuvakashelwa okuqondile ku- analytics platform ngoba izinhlelo azishiyi imithombo ebhekisayo njengoba isixhumanisi sichofozwa bese kuvuleka isiphequluli ngokuzenzekelayo.
I-Unified yakhelwe le infographic ukukhombisa ukuthuthuka kwe- izinkundla zokukhangisa zenhlalo. I-Unified yisixazululo sokuphela kokuphela kwemininingwane eqhutshwa yidatha, ukwenziwa kokuphakelwa komphakathi ngesikhathi sangempela, kanye nokukhangisa okuhleliwe kuwo wonke amanethiwekhi amakhulu ezenhlalo kungxenyekazi eyodwa.
Tags: umthengisiFacebookimali engenayo yesikhangiso se-facebookizikhangiso ze-facebook apiizikhangiso zeselula ze-facebookizindaba ezixhaswe ku-facebookezineLinkedInimali engenayo yesikhangisoizikhangiso ze-linkedin apiimali yezikhangiso zomphakathiukukhangisa komphakathiukusetshenziswa kwezikhangiso zomphakathisocial mediaukukhangisa kwezokuxhumanaukhubeketumblrTwitterImali engenayo yesikhangiso se-twitterizikhangiso ze-twitter apiizikhangiso ze-twitter api abalinganiimali engenayo yesikhangiso se-twitteryahooyoutube
I-Liven: Thatha futhi uhlanganyele nawo wonke umuntu ohambele umcimbi wakho olandelayo
Dec 23, 2016 ku-7: 01 AM
Sawubona ngiyabonga nge-infographic ethakazelisayo. Ngokwami ​​ngaqala ukuphuma ku-inthanethi ngo-1998 ngendlela ngaphambi kokuba imithombo yezokuxhumana icatshangwe ngayo futhi manje bheka ukukhula! kube wuhambo oluhlanya 🙂 ngiyabonga
Aug 13, 2021 ngo-1: 00 PM
I-Nice infographic kanye nezibalo ze-2021 zibeka inani labantu manje abasebenzisa imithombo yezokuxhumana limi ku-3.95 billion okuyinto emangazayo. Kubukeka sengathi imithombo yezokuxhumana ilungele ukuhlala nekusasa elibonakalayo.